I-Red Hat Enterprise Linux 9 ifika kunye neLinux 5.14, iGnome 40, ukuphuculwa kunye nokunye | Ukusuka kwiLinux
IRed Hat Enterprise Linux 9 ifika neLinux 5.14, Gnome 40, uphuculo kunye nokunye.
Ubumnyama | 10/05/2022 23:31 | Ihlaziywe 12/05/2022 22:55 | Unikezelo
I-Red Hat yazisa ngokusesikweni inguqulelo yesi-9 yokuhanjiswa kwayo kweLinux "iRed Hat Enterprise Linux" (RHEL), enekhowudi yekhuba.
Le nguqulo ijolise ekuphumezeni iimpawu kunye nokusebenza ngaphandle kokwahluka kakhulu kwiinguqulelo zayo zangaphambili. I-Red Hat Enterprise Linux 9 yenzelwe ukuqhuba inguqu yeshishini ngokutshintsha kwamandla emarike kunye neemfuno zabathengi kwihlabathi elisasazweyo, elizenzekelayo lekhompyutha. Iqonga liya kufumaneka ngokubanzi kwiiveki ezizayo.
Uguqulelo lwe-9 lukhulu lokuqala lokukhululwa okoko i-IBM yafumana iRed Hat yavalwa ngoJulayi 2019. I-RHEL 8.0 yakhululwa kwiinyanga ezimbini ngaphambili. Ikwayinto yokuqala enkulu yokukhutshwa kokusasazwa kweshishini ukusukela oko iRed Hat yaphinda yavelisa usasazo lwayo lwasimahla lwe-CentOS njenge-RHEL enyukayo endaweni yokwakhiwa kwakhona kwayo.
Yintoni eNtsha kwiRed Hat Enterprise Linux 9
I-Red Hat Enterprise Linux 9.0 ifika ne kernel 5.14, systemd 249, Python 3.9, PHP 8, kunye ne GCC 11.2. Kubandakanya i- ikhonsoli yewebhu esekwe kwiprojekthi yeCockpit, exhasa ngoku ukupeyishwa okuphilayo kwe kernel esebenzayo usebenzisa isixhobo se kpatch. Kukwakho neseti yezixhobo zolawulo lweekhonteyina, ezisekelwe kwiprojekthi ye-toolbx ephezulu.
I-Flatpak iseyifomathi ekugxilwe kuyo kwidesktop, ngokungafaniyo nefomathi ye-Ubuntu ye-Snap, ngokoluvo lwethu, yenzelwe zombini idesktop kunye nomncedisi. Kuba uninzi lwe-RHEL 9 yokuthunyelwa iya kuba kwiiseva, izikhongozeli ziya kuba zibaluleke ngakumbi ekuhanjisweni kwesicelo. Inguqulelo entsha izisa utshintsho olubalulekileyo kulawulo lwesikhongozelis, ukuquka uguqulelo lwesi-2 lwamaqela kunye nokusetyenziswa kwe-crun njengexesha lokuqhuba isikhongozeli esingagqibekanga.
Ngaphandle kwayo, Kwakhona kuphawulwe ukuba iphucule kakhulu ukusebenza kwe-SELinux kunye nokunciphisa ukusetyenziswa kwememori. Isusiwe inkxaso yokuseta "SELINUX=ikhubaziwe" ukukhubaza i-SELinux kwi/etc/selinux/config (ulungiselelo olukhankanyiweyo ngoku luvala ukulayisha umgaqo-nkqubo kuphela, kwaye eneneni ukukhubaza ukusebenza kwe-SELinux ngoku kufuna kudlule "selinux=0" kwikernel).
Kuyacaciswa ukuba inkxaso eyongeziweyo yolungelelwaniso lwexesha oluchanekileyo olusekwe kwiprothokholi ye-NTS (Inethiwekhi yoKhuseleko lweXesha), esebenzisa izinto zesiseko esingundoqo sikawonke-wonke (PKI) kwaye ivumela ukusetyenziswa kwe-TLS kunye ne-encryption eqinisekisiweyo ye-AEAD (iAuthenticated Encryption with Associated Data) yokukhusela i-cryptographic ye-cryptographic yentsebenziswano ye-server-server phezu kwe-NTP protocol (Ixesha leNethiwekhi Umgaqo-nkqubo). Iseva ye-NTP yekhrony ihlaziywe kuguqulelo lwe-4.1.
IRed Hat Enterprise Linux 9 nayo ibalaselisa iinzame zeRed Hat zokuhambisa iimpawu eziphambili Inkqubo yokusebenza njengeenkonzo, ukuqala ngenkonzo yomfanekiso omtsha. Ukwakha ekusebenzeni okukhoyo kwesiseko sesiseko, le nkonzo isekela ukucingelwa kweenkqubo zefayile zesiko kunye nababoneleli befu abahamba phambili kunye nobuchwepheshe be-virtualization, kuquka i-AWS, i-Google Cloud, iMicrosoft Azure, kunye neVMware.
I-Red Hat kunye ne-AWS zisebenze kunye iminyaka engaphezu kweshumi ukuqhuba i-Red Hat Enterprise Linux-based loadloads kwi-AWS iimeko zisebenzisa iiprosesa zeGraviton eziyilwe yi-ARM. Ukuhlanganiswa kweRed Hat Enterprise Linux 9 kunye ne-AWS Graviton processors inceda ukunyusa ukusebenza kwexabiso kuluhlu olubanzi lwemisebenzi yamafu esebenza kwi-Amazon Elastic Compute Cloud (i-Amazon EC2).
IRed Hat Enterprise Linux 9 iyaqhubeka nokuzibophelela kweRed Hat ekuboneleleni nge Iqonga leLinux elenziwe lukhuni elikwaziyo ukuphatha owona mthwalo ubuthathaka kakhulu, ukudibanisa inguqulelo kunye nezakhono zokhuseleko olubanzi. Imirhumo yeRed Hat Enterprise Linux ikwabandakanya ukufikelela kwiRed Hat Insights, inkonzo yeRed Hat eqhubekayo, esebenzayo yokuskena ukuze kubonwe kwaye kulungiswe ubuthathaka obunokubakho kunye nemiba yoqwalaselo ngelixa kunyuswa ukusetyenziswa kobutyebi kunye nobhaliso lwamafu axubileyo.
I-Red Hat Enterprise Linux 9 ikwabonisa ubume bomlinganiselo wobume boyilo lwesignitsha yedijithali kunye neehashi (IMA). Ngoyilo lokulinganisa ingqibelelo, abasebenzisi banokuqinisekisa ukunyaniseka kwenkqubo yokusebenza usebenzisa iisignesha zedijithali kunye neehashi. Oku kunceda ukufumanisa utshintsho olubi kwiziseko zophuhliso, okwenza kube lula ukunciphisa amathuba okuba kuchaphazeleke iinkqubo. Ukuxhasa ngakumbi ukhetho lweshishini loyilo lwezakhiwo kunye nokusingqongileyo ngokusebenzisa ilifu elixubeneyo elivulekileyo, iRed Hat Enterprise Linux 9 iya kufumaneka kwi-IBM Cloud kwaye ikwazalisekisa ezona mpawu zibalulekileyo zokhuseleko kunye nesakhono se-IBM Power Systems kunye ne-IBM Z.
Ngaphandle koko, ikwaxhasa i-kernel ephilayo ekufakweni kwi-Red Hat Enterprise Linux web console, ukuqhubela phambili ngokuzenzekelayo ukuba imibutho ye-IT inokwenza njani imisebenzi ebalulekileyo kwinqanaba. Amaqela okusebenza kwe-IT angafaka uhlaziyo kwiinkqubo ezinkulu ezisasazwayo ngaphandle kokufikelela kwizixhobo zomyalelo womyalelo, okwenza kube lula ukujongana nemiba echaphazela imveliso ukusuka kwiziko ledatha eliphakathi ukuya kumafu amaninzi, kubandakanywa nomjikelezo.
Okokugqibela, ukuba unomdla wokwazi okungakumbi ngayo, unokujonga iinkcukacha Kule khonkco ilandelayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukusuka kwiLinux » Unikezelo » IRed Hat Enterprise Linux 9 ifika neLinux 5.14, Gnome 40, uphuculo kunye nokunye.
I-Fedora 36 sele ikhululwe kwaye iza notshintsho oluninzi, zijonge!
IChrome OS 101 ifika nenkqubo entsha yokubuyisela, uphuculo kunye nokunye